Naghachi interface nke Firefox 28 na nsụgharị 29 | Akụkọ akụrụngwa
Bọchị ole na ole gara aga, Mozilla tụrụ aro ka emelite ihe nchọgharị Internetntanetị na Firefox 29; Anyị enyochaala ihe nchọgharị Internetntanetị a na interface chọrọ oge ụfọdụ iji nwee ike ịchọta ụfọdụ ihe ndị anyị lere anya na mbụ, na mbipute 28.
Asịrị ahụ kwuru maka nkwụsị nke ọtụtụ ọrụ ya abụghị eziokwu, kama, ọ dị mkpa ịmara otu esi enyocha akụkụ ya ọ bụla iji chọta ha; agbanyeghị, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ole na ole na-adịkwaghị na mbipute nọmba 29 nke Firefox, ihe nwere ike iwe iwe maka ndị jiri ha ogologo oge ruo na mbipute 28. N'ihi nke a, n'isiokwu a anyị ga-ekwu otu esi eweghachite ihe ndị a (ọ bụrụ na ha chọrọ ya) na-enweghị ịlaghachi na nsụgharị .
Iji nwetaghachi ma ọ bụ ọ bụghị interface ochie na Firefox 29
Es ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị tupu ị gawa na ihe anyị ga - eme ọzọ, nke a n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ usoro ahụ Ọ nwere ike ịgbagha agbatị mgbe anyị na-agbatị ndọtị anyị ga-etinye na Firefox 29, mana ị ga-eburu n'uche atụmatụ ọhụrụ nke Mozilla na-abịa na nyocha ọhụụ a. Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịga njikọ ebe anyị ga - ebudata na anyị ga-etinye mgbakwunye nke ga-enyere anyị aka ịlaghachi na ntanetị ochie, otu ihe ahá »Classic nwere aha Omuma isiokwu Iweghachi.
Mgbe emechara usoro ntinye nke ngwa mgbakwunye a, dịka n'ọtụtụ ndị mgbakwunye nke ihe nchọgharị Internetntanetị a, anyị ga-enwerịrị ịmalitegharị ya maka mgbanwe ndị ga-emetụta. N'ihi nke a, ọ bụrụ na ị na-eme nchọgharị na ibe weebụ ma ọ bụ nwee ụfọdụ mmasị guzobere, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ gaa na profaịlụ dị iche ka ị ghara ịgbanwe ya; ozugbo ị malitegharịrị Mozilla Firefox 29 ị ga-ahụ na bọtịnụ ahụ gosipụtara ọzọ na aka ekpe aka ekpe, ọ bụghị naanị ihe ị ga-agbake na mgbakwunye a.
A ga-enwetaghachi ọdịdị ahụ n’ozuzu na ndọtị nke anyị etinyegoro Firefox 29, ya bụ, ogwe URL, ogwe ihe nchọgharị, ndọtị na ebe ị na-adịbu, bọtịnụ Firefox na akuku aka ekpe aka ekpe. na ihe ndi ozo furu efu, Otu ihe ahụ na-abịa ịbụ mmanya mgbakwunye nke dị na nsụgharị 28, nọ na ala nke ihe nchọgharị ahụ.
Ihe onyonyo ahu anyi dobere n’elu na egosi anyi na anyi nwere na Firefox bọtịnụ aka ekpe n'elu yana, na anyị na-arụ ọrụ na mbipute 29 nke ihe nchọgharị Mozilla a. Ọ bụ ezie na ọdịdị ahụ agbakeela, enwere ihe ole na ole ị ga-ejikwa n'ụzọ pụrụ iche ka ị wee nwee ike iji ha dịka ọ dị na mbụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ anyị weghachitere na aka ekpe aka ekpe, ndị «nhọrọ»Na anyị hụrụ na mbụ, na-agakwuru ha ka anyị nwee ike iji ha.
Ọ bụrụ na ị bugharịa pointer pointer na mpaghara ọ bụla ebe enwere obere akụ na-atụ aka nri, ma ọ bụrụ na ị na-ezu ike na òké na aha ya kpamkpam anaghị eme ihe ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị tinye pointer pointer na otu akụ ahụ, ọrụ dị iche iche ga-arụ ọrụ ga-egosipụta ebe ahụ.
Na "nhọrọO bu ihe nwute, obughi ndi nile anyi huru na mbu ka agbakere, dika enwere ike nwee ike ime ka ogwe ibe edokọbara ahụ anya ma ọ bụ adịghị ahụ anya; Ka o sina dị, ọ bụrụ na ị bugharịa pointer pointer na otu mpaghara nke taabụ ihe nchọgharị ahụ wee pịa ya na bọtịnụ ziri ezi, ọrụ a ga-apụta nke anyị na-ahụghị na mbụ, ya bụ, igosi ma ọ bụ zoo ya, n'etiti ndị ọzọ gbakwunyere.
Akụkụ ọzọ nke ị kwesịrị iburu n'uche bụ na n'agbanyeghị agbanyela bọtịnụ Firefox n'akụkụ aka ekpe elu, n'akụkụ ọzọ nke ihe nchọgharị ahụ (n'akụkụ aka nri elu) ahịrị atọ ma ọ bụ "akara hamburger" ka na-echekwa, site na ebe anyị nwere ike ijikwa atụmatụ ọhụrụ dị iche iche nke Firefox 29.
Na mmechi, ngwa mgbakwunye enyerela anyị aka ijikọ interface Firefox 28 ochie yana atụmatụ ọhụrụ nke Firefox 29.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu ị ga-esi nweta bọtịnụ Firefox na nwelite nke 29
Zipu ozi efu n'etiti kọmputa na ekwentị mkpanaaka gị na CellSend